China ngwa enyemaka mbụ Manufacturer na Supplier | Nzukọ
OEM, ODM bụ nnabata
silkscreen logo (ahaziri)
Mmepụta: Akpa Enyemaka
Ngwa: Ngwa enyemaka mbụ a dị ukwuu fma ọ bụ ọtụtụ iji ụbọchị ma ọ bụ ihe omimi, gụnyere: ụlọ, ọfịs, ịma ụlọikwuu, ụgbọ ala, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụgbọ ala, egwuregwu, ụgbọ mmiri, njem njem, ebe ọrụ na ụlọ akwụkwọ wdg.
Ngwa ihe mberede ga-enye gị ihe ngwọta maka ndahie efu kwa ụbọchị na ọbụna ọzara ọgụ n'ọhịa lanarị trauma ọnọdụ, nke gụnyere: ọnwa ogologo njem ụgbọ mmiri kayak, obere ihe ọghọm anụ ụlọ na nsogbu ụmụaka na-adị kwa ụbọchị. Debe ngwa a n'ime akpa gị, ogige aka ụgbọ ala ma ọ bụ ụlọ ọrụ ahụike maka ngwa ngwa na ngwa ngwa maka nsogbu.
Ihe: 400D / 600D polyester ma ọ bụ nhazi
Agba: dị uhie / Ọchịchịrị Grey / Akara, nhazi
Nha: 10 x 3 x 13cm, ma ọ bụ nhazi
Nchekwa: Nọgide na-adị ọcha, na-akpọ nkụ.
Emere ngwa enyemaka mbụ na oke mara mma, 10x3x13cm, ọ dị mfe iji buru maka ime ụlọ na n'èzí. Ndị na-ekewa ihe nwere ike ijide ihe dị mkpa ma dị mma maka ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya.
Akara mbipụta dị.
Anyị na-enye ọrụ OEM & ODM, ọ bụrụ na ị na-achọ nha dịgasị iche, ihe, agba, ihe owuwu dị n'ime, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ebe a, anyị ga-enye gị ọrụ nkwụsịtụ.
Ihe nkpuchi nkpuchi a buru ibu iji jide ihe nkpuchi ole na ole, ma biko biko etinyela ihe eji eme ihe na ihe nkpuchi ihu ohuru, iji zere imetọ.
A1: Anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nkwụsị nkwụsị maka gị. Anyị nwere ike ijikwa ọrụ ndị ahịa / imewe / nlele / nnukwu mmepụta / nkwupụta omenala / mbupu & nnyefe.
Q2: Gini gbasara usoro mbufe ?
A2: site na ozi ozioma / site na ikuku ikuku / site n'oké osimiri na ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen.
Q3: Gini banyere ugwo usoro?
A3: T / T, L / C maka nnukwu ego, na obere ego, nwere ike ịkwụ ụgwọ site na Paypal, Wechat, Alipay, na ụzọ ndị ọzọ ama ama ama iji kwụọ ụgwọ.
Q4: Gini banyere nnyefe oge / mmepụta oge?
A4: mmepụta kwa ụbọchị> 10,000pcs, oge nnyefe bụ 20 ~ 25days, anyị nwere ihe karịrị 60 inji igwe iji kwado nkwụsi ike na ngwa ngwa na nnyefe.
Mmadụ Bịa kpọtụrụ anyị maka ajụjụ ọ bụla ma kwurịta ya.
Q5: Enwere m ike ibipụta anyị logo na ngwaahịa?
A5: Ee, eziokwu. Biko nye ihe osise ahụ, anyị ga-akwadebe ihe osise ahụ maka nnwapụta gị tupu ị rụọ ọrụ.
Q6: Enwere m ike ịtụ ụfọdụ n'omume?
A6: Ee, eziokwu. Anyị nwere ike ịhazi ihe nlele ahụ n'aka gị site na nnakọta ibu.
Q7: Gịnị bụ gị MOQ (Opekempe Order ibu)?
A7: MOQ bụ 3000. Ọzọkwa, biko biko lelee anyị maka ngwaahịa ọ bụla dị maka ịnyefe ngwa ngwa.
Q8: you nwere ike hazie m imewe?
A8: Ee, anyị na-enye ọrụ OEM na ODM.
Anyị nwere ndị otu R & D siri ike na ụlọ ọrụ ngwá ọrụ iji kwado mmepe ahụ.
Site na ịbịaru, prototype, tooling, sample, ọrụ ule na ọgwụ mmepụta, anyị na-eme niile n'ụlọ. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa.
Ngwa ihe mberede ga-enye gị ihe ngwọta maka isi ihe na-atụghị anya ya kwa ụbọchị na ọbụlagodi n'ọhịa ọgụ ọgụ lanarị ọnọdụ nsogbu, nke gụnyere: ọnwa ogologo njem ụgbọ mmiri kayak, obere ihe mberede na ụmụ ọhụrụ kwa ụbọchị.
Nke gara aga: Igbe nkpuchi nkpuchi
Osote: Akpa enyemaka mbụ
Ajụjụ ọnụ telivishọn nke Guangdong ...
The osote Mayor nke Dongguan obodo Mr. Wan v ...